Shacabka Muqdisho oo la yaab ku tilmaamay hab dhaqanka Farmaajo | Keydmedia
Shacabka Muqdisho oo la yaab ku tilmaamay hab dhaqanka Farmaajo
Shacabka ayaa saaka ku soo toosay waddooyinka magaalada oo la xiray, islamarkaana la soo dhoobay ciidamo tiro badan oo gaadiid dagaal wato.
MUQDISHO, Soomaaliya - Shacabka magaalada Muqdisho ayaa layaab ku tilmaamay hab dhaqanka ay dowladda madaxweyne Farmaajo la timid maanta, kadib markii waddooyinka magaalada loo xiray imaanshaha labo hoggaamiye goboleed.
Goobaha fadhi dirirka ah ee shaaxa lagu cabo ayaa aad u hadal hayaa labadaan hoggaamiye ee beel ahaanta xigo madaxweyne Farmaajo iyo qaabka soo dhaweyntooda waddooyinka looga xiray saaka Shacabka Muqdisho, islamarkaana hakad loo geliyay nolosha qoysas danyar ah.
Xirnaashaha waddooyinka oo aan looga baran xilliyada ay soo degayaan madaxda dowlad goboleedyada iyo masuuliyiin kale ayaa la yaab iyo fajac ku noqotay Shacabka Muqdisho oo saaka ku waabariistay xaalad nooc kale ah oo aan laga warqabin.
"Waxaa la yaab igu noqotay oo saaka aan ku soo toosay iyadoo la leeyahay waddooyinka waa xiranyihiin, markaan idaacaha dhegeystay waxaan maqlay in imaansha Axmed Madoobe iyo Deni jidadka loo xiray, taasoo aan lasii fajacay." Ayuu yiri mid ka mid ah dhalinyarada Muqdisho oo keydmedia Online la hadlay
Dadka qaar ayaa sheegaya in madaxweynaha Puntland oo horey u diiday 13 kursi ee Aqalka Sare laga siiyay gobolka Banaadir iyo maqaam u sameyntiisa in haddana maanta imaanshihiisa Muqdisho waddooyinka loo xiro, ayna tahay qalad weyn oo laga galay bulshada gobolka Banaadir.
Madaxweyne Farmaajo ayaa lagu eedeynayaa in uu kala fadilay madaxda maamulada qaarkood oo uu kala xigsaday, waxaana xusid mudan in dhowr jeer ay magaalada Muqdisho safar ku yimaadeen madaxda Koonfur Galbeed, Hirshabeele iyo Galmudug, islamarkaana aan waddooyinka loo xirin.